Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fampianarana jeografia nasionaly: Banky any Egypt
Ny National Geographic Learning, marika Cengage Group, dia nanambara androany fa niditra tao amin'ny fiaraha-miasa maharitra amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena Egypte izy ireo, manome fandaharam-pianarana 4-6 ho an'ny mpianatra efa ho fito tapitrisa any Egypt.
Ny fiaraha-miombon'antoka National Geographic, izay hanatitra fitaovam-pirinty sy nomerika, dia ampahany amin'ny vinan'ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena Dr. Tarek Shawki's Education 2.0 - fanovana tanteraka ny rafi-panabeazana an'i Egypte tamin'ny taona 2030 - notohanan'ny fifantohana amin'ny fahaiza-miaina, ny fahaiza-mamorona, ny fitsikerana fisainana sy avonavona egyptiana. Miaraka mihoatra ny Mpianatra 20 tapitrisa no nisoratra anaranaao amin'ny K-12, Egypt dia manana ny rafi-pampianarana lehibe indrindra any Afovoany Atsinanana sy Afrika. Na izany aza, ny fanabeazana any Egypta dia tsy nifanaraka tamin'ny tantara tamin'ny fanomanana ireo mpianatra 21st fahaizana mamaha olana amin'ny taonjato nilaina hananganana kariera misy heviny.
“Tianay ny hianatra mandritra ny fiainana ny mpianatra fa tsy amin'ny fanadinana”, hoy ny Dr. Tarek Shawki, Minisitry ny Fanabeazam-pirenena sy ny fanabeazana teknika any Egypte. "Nila mpiara-miasa izahay izay afaka manampy anay hampitaovan'ny mpianatra fahaizana amin'ny asa ho avy sy ny fahombiazan'ny fiainana, manomboka amin'ny mbola kely. Nisafidy ny National Geographic Learning izahay satria ny atiny, famolavolana ary pedagogy dia tena mitondra fiainana ho an'ny mpianatra. ”
Ho fanohanana ny fiovan'ny fanabeazana any Egypte, ny National Geographic Learning dia manolotra fandaharam-pianarana ho an'ny Anglisy, Fianarana ara-tsosialy, fahaiza-manao amin'ny asa ary ny haitao momba ny fifandraisana sy ny fifandraisana (TIC). Ny fahaiza-manao momba ny asa sy ny informatika dia manakiana manokana ny vina amin'ny fanabeazana 2.0 any Egypte, noho izy ireo mampiditra ny ankizy 10-12 taona amin'ny asa maro izay mety tsy dia hain'izy ireo loatra, sy ny fahaiza-manao ilain'izy ireo amin'ny fahombiazana amin'ny ho avy. .
"Ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena any Egypt dia naka fomba farany hamoronana fandaharam-pianarana maharesy lahatra, manome toky fa ny taranaka ho avy dia hampivelatra ny fahalalana, ny fahaiza-miaina ary ny soatoavina ho an'ny fahombiazana amin'ny ho avy," hoy i Alexander Broich, filohan'ny Cengage Global Businesses ary General Manager for English Language Fampianarana. “Ao amin'ny Cengage Group, mino tanteraka izahay fa ilaina ny manomana ny mpianatra amin'ny fiainana sy asa. Ny tanjonay dia ny hanome antoka ireo mpianatra fa tsy hoe vonona diplaoma fotsiny, fa vonona asa. Ny Minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena any Egypt dia mifanindry mafy amin'ity iraka ity, ary faly izahay manampy amin'ny fiainana, amin'ny asa fanompoana ho an'ny fanovana manentana ny fampianarana 2.0 an'ny Dr. Shawki. ”
Ho fanampin'ny fanomezana fandaharam-pianarana anglisy amin'ny maha-mpiara-miasa azy, ny atiny TIC dia hozaraina amin'ny teny Anglisy sy Arabo hanampiana ny fianarana ny teny Anglisy ho an'ny mpianatra ho ampahany amin'ny fianarany ambaratonga voalohany.
"Ny fahaizana amin'ny teny anglisy dia mitana andraikitra lehibe koa amin'ny fanampiana ireo mpianatra manerantany amin'ny tsenan'ny asa," hoy hatrany i Broich. "Mino izahay fa ny antsasak'izao tontolo izao dia hiteny na hianatra anglisy amin'ny 2030 satria ny anglisy mahay no vavahady ahazoana asa be olona an-tapitrisany eran'izao tontolo izao."
Ny fandaharam-pianarana dia manasongadina ny egyptiana manentana ny fanahy sy ny National Geographic Explorers hanampy amin'ny fampidirana, handrisihana ary hampiorina ny avonavona amin'ireo mpianatra ejiptiana.
"National Geographic dia nanana tantara hatry ny ela nanazava sy niaro ny fahagagana eran'izao tontolo izao", hoy i Fred Hiebert, Archaeologist in Residence for the National Geographic Society, ary mpikambana iray ao amin'ny National Geographic Learning's Advisory Council ho an'ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny Minisiteran'ny Egyptianina. “Ny tantara momba ny fiantraikan'ny tantaran'ny olombelona sy ny kolontsainy eto amin'ny planetantsika dia ampahany amin'ny lova natokana ho an'ny National Geographic. Tsy misy ohatra tsara kokoa an'io noho ny fandrakofan'ny National Geographic an'i Egypt, iray amin'ireo kolontsaina mitohy tranainy indrindra fantatra. ”
Hoy i Hiebert nanohy ny teniny: "Ity fiaraha-miasa ity dia fotoana mety hanakanana ny National Geographic hanandratra feo sy mpahay siansa ao an-toerana."
Ny sekoly ambaratonga voalohany rehetra manerana an'i Egyptia dia nanomboka nampiasa fandaharam-pianarana National Geographic Learning tamin'ny 9 Oktobra, nanomboka tamin'ny kilasy fahefatra ho an'ny taom-pianarana ankehitriny, ary nitatra tamin'ny kilasy fahadimy sy fahenina tao anatin'ny roa taona.
Momba ny National Geographic Learning
National Geographic Learning, marika Cengage Group, dia mpanonta famoahana fampianarana ho an'ny tsenan'ny fampianarana Anglisy Anglisy sy fampianarana ambaratonga faharoa manerantany. Ao amin'ny National Geographic Learning, mino izahay fa ny mpianatra mirotsaka sy mientanentana dia hahomby ary hamolavola ny fitaovanay amin'ny fomba fitenenana an-tsoratra izay tena fomba iray hiantsoana ireo fifandraisana ireo. Raha te hahalala bebe kokoa dia tsidiho: ellngl.com.
Momba ny Cengage Group
Vondrona Cengage, orinasam-pampianarana teknolojia manerantany manompo mpianatra an-tapitrisany, manome vokatra sy serivisy nomerika avo lenta ary tsara izay manome ny mpianatra ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manao ilaina hiomanana asa. Nandritra ny 100 taona mahery, navelanay ny hery sy ny fifaliana amin'ny fianarana amin'ny atiny azo antoka, mahasarika, ary ankehitriny, sehatra nomerika tafiditra.